Ukuvuselela ukuvala i-Coronavirus covid-19: Uma uvuka futhi uqaphela ukuthi ubanjwe, yini ongayenza? : UMartin Vrijland
Lapho unyaka ka-2020 uqala ngizwa ukuthi kuzoba unyaka onzima. Ukubona iminyakazo yokugcina ebheke ekuvaleni okugcwele kwe-coronavirus covid-19 manje kunikeza ithemba elithile lokuthi kuzophela maduze. Ngobusuku bonyaka omusha, ngabhala: “Ngokwengxenye yami, unyaka ka-2020 kuzoba unyaka wokudlwengulwa kanye nejubane lezinguquko. Izinguquko esingakaze sizibone emlandweni. Isikhathi siyaphela sokuba ngababusi bomhlaba. Kusele iminyaka engama-25 kuphela kuze kube yilapho sekukodwa ukuqamba amanga. ”
Encwadini yami ngasekupheleni konyaka ka-2019, ngabikezela ukuthi kusamele kube khona ubhubhane futhi ngikhombisa ukuthi sifakaza ngohlelo olubanzi lwegciwane. Ngasekuqaleni kukaFebhuwari 24, ngabhala indatshana ekhombisa ukuthi kwase kuyisikhathi sokuhamba. Lokho kwakungamasonto ambalwa ngaphambi kokuba kubonakale sengathi kunesimo esiphuthumayo eNetherlands. Isithombe esidwetshelwe abezindaba IMBers lawo maphepha okuya ngasendlini yangasese, ngokubona kwami, ngokuyikhohlisa kwakuyindlela yokuphamba yokuhumusha ukunaka kulokhu okufanele ngabe uyokuthenga: ukudla okuzinzile eshalofini, ukudla okusemathinini, amanzi, njalonjalo. Ngenhlanhla, abafundi babekhona esikhathini esiningi ngaphambi kokuba kuqubuke uvalo.
Ithemba lokuthi "cabal" lizosulwa
Izibikezelo eziningi ezilungile ezilandelwe emavikini asanda kwedlula ngabona ukuthi yiziphi izinyathelo ezizolandela. Kungakho ngivame ukubuzwa: "Yini okufanele ngiyenze manje?", "Ngifanele ngisingathe kanjani zonke izindlela?"
Kwimithombo yezokuxhumana manje sesibona amavidiyo as Janet Ossebaard zungeza. Uveza uDonald Trump njengomsindisi wabantu, futhi ababukeli bayacelwa ukuba bazithobe kukho konke okwenzeka kubo. Amavidiyo wakhe azama ukukholisa abantu ukuthi siyadlalwa, kepha sibona ngokucacile iqhaza eliphindwe kabili labaphikisi abalawulwayo lapha. UJanet Ossebaard uzama ukushayela abantu enetheni lokuphepha le-Q-Anon. Ubuye athi uDonald Trump umatasatasa 'i-cabalnokuthi i-coronavirus idlala indima kulokhu.
Yini abantu abangaboni ukuthi imidiya ehlukahlukene eminingi idaliwe ukuze idlale okuphindwe kabili. Zikunikeza ithemba lokusindisa abafokazi noma ukuwa kwe-cabal (enoTrump njengomsindisi). Kufanele ngisize labo bantu baphuphe ephusheni: I-cabal ngeke iwe.
Izibukeli zamavidiyo akhe zifakwe kumodi engenzi lutho. Ngithi kubo:
Ucindezelwa kwimodi yokungena ngabantu abahlala ngemuva kwekhamera futhi uzenze sengathi bakuhlelela yona. Kungamampunge ukuthi iQ-Anon yiklabhu eyimfihlo yabantu abazungeze uTrump efuna ukuthatha umcebo ku-1%. Baze ukuza ukukusindisa! Ngeshwa. Ukudumazeka. Lokho ngethemba lamanga.
UTrump ngu-cabal. I-Trump njengoba nje isebenza kanzima ngezindlela zokukhiya. Isithombe esiveziwe sokuthi amashumi ezinkulungwane zamasosha weDefender 2020 alungele ukuhlanza 'i-cabal' eYurophu yithemba lamanga.
UJanet Ossebaard ufuna ukuthi uhlale uzolile ngaphakathi lapho la masosha eqala ukuhlanza abakhethekile. Thola isithombe?
Ukusetha kabusha kwezezimali
UJanet Ossebaard ubuye athi kuzoba nokuhlelwa kabusha kwezezimali lapho umcebo manje olele nabacebile u-1% uzobuyela kubantu. "Umsindisi omkhulu uTrump uzokuhlelela lokho nawe." Cha, ngeke. Lokho azokwenza (njengabaholi baseYurophu) kuzokunikeza imali eyisisekelo futhi kungenzeka ukuthi imali enkulu yamazwe amaningi, amabhange kanye nezimpesheni izothuthukiswa kuzwelonke. Uyazi ukuthi lokho kubizwa ngani? Ubukhomanisi.
Sidlulela ohlelweni lwamakhomanisi. Isitimela esisheshayo. Ngakuchaza ngokuningiliziwe lesi sihloko.
Ngakho-ke sifakaza ngokweqiniso ukusetha kabusha kwezezimali, kepha enye inhlobo ngaphandle kukaQ-Anon noJanet Ossebaard bayakutshela. Bengihlale ngithi lapha kusayithi iminyaka ukuthi ukusetshenzelwa okunjalo kwenziwe kabusha (bheka lapha). Igciwane le-corona manje seliyi-alibi enhle. Ukuthi isixuku singase sidlalwe ngandlela thile kwesinye isizathu siyabonakala, kodwa indaba kaJanet Ossebaard igcwele izicupho zezindaba eziyimfihlo (njengalapha kuchaziwe)
Uhlelo lwamakhomanisi uJanet Ossebaard nabanye abaningi manje luyakhazimulisa, ngenkathi bekucela ukuthi uhlale emuva uthule, empeleni lunobuhlakani. Kuzoba munye wobukhomanisi bobuchwepheshe kube umbuso.
Kulindelwe ukuthi kungenzeka kube nenqwaba yezombusazwe ezoshiya lo mkhakha. Lokhu mhlawumbe kungenxa yokuthi kuyasiza ukufaka esikhundleni se-pawns esiqale le nqubo yobumbano ngama-pawns amasha 'ngezandla ezaphukile'. Ungakhohliswa ngumqondo kanye nenkambo kwimithombo yabezindaba ehlukile abanye abaphathi abaziwayo abaye bayishiya. Lokho kuyingxenye yomdlalo wokuphepha we-Q-Anon.
Uhlelo lobuKhomanisi lobuchwepheshe kungenzeka lusho ukuthi uzothola ukuqiniseka okuyisisekelo (imali engenayo, izindlu, njll.), Kepha kodwa ukuthi uzobhekwa ngobuchwepheshe.
Yonke intshukumo oyenzayo izogadwa yizinhlelo ezinkulu zedatha. Ukuqubuka kwe-coronavirus kuqinisekisa ukuthi izindlela ezingeziwe zobuchwepheshe zingasebenza ngokushesha. Kufanele ucabange okukodwa ubunikazi be-digital obungabonakali, okuthi, ngokwesibonelo, aqophe ukuthi imaphi amagciwane onawo; ukuthi usindile; imuphi umuthi nokugoma owuthathile futhi impilo yakho ingaqashwa ngesikhathi sangempela kusuka efwini. Uba yingxenye ye-5G internet izinto.
Ngakho-ke uma uvuka ubone imidiya ehlukile izama ukukugcina kwimodi yokungena namaqiniso asengxenyeni exutshwe namanga nokusiza ukwamukela ubukhomanisi ngamathemba amanga, uyabona yini ukuthi abakukhombisi kwezobuchwepheshe ingozi ecashile. Bafuna uhlale ngaphakathi futhi uvumele nje amabutho namaphoyisa benze into yabo. Ngemuva kwakho konke, beza ukuzohlanza i-cabal. Cha, kwabezindaba iningi lizobika ngenguquko eshaywayo ku-The Hague noma eBrussels; okungenani ngeke bakukhombise ukwethuka okungokoqobo. Lo mdlalo we-chess ubheka lokho okulindele, ukuze uqhubeke nokulandela ukulandisa.
Ngakho-ke uma ufuna ngempela ukuvuka, kufanele udlule ekukhohliseni kwamanga njengezindaba ze-Q-Anon noDonald Trump. Uma ufuna ngempela ukuvuka, kufanele ubone ukuthi kwenzekani futhi uqaphele ukuthi umbuso wobushiqela awenzeki. Lowo mbuso wobushiqela awusahambi. Ngeke kuphinde. Inkululeko ovunyelwe ukuyijabulela izobuyela kuphela uma uthola 'uphawu'. Ngabe lokho kusikhumbuza isiprofetho esisebhayibhelini? Yebo, lokho kusikhumbuza isiprofetho sebhayibheli:
Futhi akukho muntu ongathenga noma othengise ngaphandle kokuthi onophawu, igama lesilo, noma inombolo yegama lakhe ”(Isambulo 13: 16-17)
Encwadini yami ngiyachaza ukuthi sesikhathini sokuphela kwesiprofetho. Ngenkathi abaningi bakhetha ukungayinaki inkolo kulezi zinsuku, kanti mina angizikholwa ngokwami, ngiyabona ukuthi abaholi bomhlaba balandela imigomo yezenkolo. Akunakusho ukuthi uTrump wamemezela iJerusalema njengenhloko-dolobha yakwa-Israyeli, futhi akusikho nje ukuthi bafuna ukwakha kabusha ithempeli likaSolomoni. Encwadini yami ngichaza ukuthi abaholi bomhlaba balandela kanjani 'umbhalo omkhulu'. Lowo mbhalo we-master manje usenzeka ngokusobala futhi ngokushesha okukhulu ngaphansi kwamehlo ethu.
futhi uyabona ukuthi uboshiwe
Ngokushesha sizothola en masse ukuthi sizivaleleke ngokuphelele. Ngiyasola ukuthi kuzoba isikhathi eside. Abantu kumele besabe kakhulu ukuthi bazokwamukela izinyathelo ezinobunzima. Abaningi bazokwazi ukubuka abantu behanjiswa ngemuva kwamafasitela abo noma kuvulandi. Basuswe ngoba kungenzeka ukuthi banegciwane noma ngoba "abalalelanga imiyalo." Futhi ngoba wonke umuntu usezindlini zabo, akekho osizayo.
Abezindaba bazoqhubeka nokusitshela ukuthi ufakazela ukuhlinzekelwa ngokuhlanzekile futhi okudingakalayo futhi akekho oyokwazi ukuthi bangaki abantu abazonyamalala ezigodini. Ngenxa kaJanet Ossebaard ulinda uthule; ngokuzethemba "ukuthi uTrump uhlanza i-cabal".
Mhlawumbe sisazothola ama-roundups kubantu abaphuma emigwaqweni ngenxa yokukhathala nendlala ngakho-ke 'ungalaleli imiyalo'. I-Defender 2020 mhlawumbe isilungele lokho (hhayi ukuyihlanza "i-cabal").
Ngemuva kwalokho, ngemuva kwezinyanga noma mhlawumbe unyaka, ithemba elincane lokukhululeka lizokhonjelwa ezombusazwe.
Ithemba lokuthi abezindaba nabezepolitiki ekugcineni bazokhipha okokuqala ngqa ukuthi kunomuthi ovimbela igciwane bese unikezwa umuthi wokugomela. Futhi kungaqagelwa ukuthi lokhu kuzohlanganiswa nokwenziwa kohlelo lwedijithali (njengoba kuchaziwe ngenhla), lapho kuhlale kucace kuye wonke umuntu ukuthi ukuphi nokuthi uwutholile muphi umuthi, kubandakanya nokuqapha isikhathi sangempela kwezempilo (futhi kufaka phakathi i-CRISPR-CAS12 funda futhi ubhale ukusebenza).
Ngemuva kwalokho ungahamba futhi. Ukusuka kwizoni kuya kundawo futhi akusekho ngayo yonke leyo mingcele evulekile, kepha izikhala zemingcele yomkhawulo zizoba zikhulu kakhulu ngokwezinombolo nangezinombolo. Sithola umehluko kubantu abavunyelwe ukungena ezindaweni ezithile nakwabanye abavunyelwe ukungena. Siphokophelele “esimeni sokusindisa” sobunjiniyela.
Yini esingayenza-ke? Kufanele yini simelane nezinyo nezipikili? Ngikholwa ukuthi kunamalungelo ayisisekelo abantu okungafanele aphulwe, futhi leyo yinkululeko. Manje lokhu kwephulwe kusukela kusikhumbuzo sakudala futhi awukwazi ukumelana nesimo samaphoyisa ngokomzimba. Eqinisweni, noma yiluphi uhlobo lokumelana luzoncishiswa ngesihluku. Noma usho emithonjeni yezokuxhumana noma egumbini lokuhlala (lapho uSiri elalele khona) ukuthi ukuthole kuyizinyathelo zonke ezinamahloni, ungaba sesimweni sobushiqela.
Noma ngubani oyinto esongelayo angakwazi futhi mhlawumbe uzoxoshwa. Konke lokhu kuzokwenzeka ngaphansi komhlahlandlela "wokuqukethwe kwe-coronavirus", ngoba abantu abangayilandeli imiyalo noma mhlawumbe basikisele nakwabanye ukuthi bangazilandeli iziyalo bayingozi emphakathini.
Ngabe anginazo ngempela izeluleko ezisebenzayo kulokho ongakwenza. Yebo, kodwa lokho kumayelana nokuguqukela kokungazi nesimo sengqondo esihluke ngokuphelele kunesimo sengqondo sokulalela lapho abezindaba nabokunye abezindaba sebekuyekile. Lokho kumayelana nokwenza kusebenze ukuthi ungubani ngempela. Lokho kumayelana nokusebenzisa insimu yamandla okudala nokuvela kwakho. Lokho kuzwakala kuduma, kodwa akunjalo. Ngimane ngikuchaze, ngiyakuthembisa.
Ngokubona umbhalo obhaliwe futhi wenze izibikezelo eziqondile, kuyacaca ukuthi lesi yisinyathelo esibalulekile ekuguqukeni kwangempela. Bengivame ukuthi i-athikili eyi-1 ifushane kakhulu kulokhu. Kungakho ngisebenze isikhathi eside encwadini ecacile nefundekayo. Ngakho-ke kufanele ufunde kuqala lokho. Kubaluleke ngempela manje! Futhi-ke ungafunda okungeziwe kuleyo ncwadi, lapha kuwebhusayithi.
Siyizidalwa ezinamandla kakhulu futhi sekuyisikhathi sokuphuma kwimodi yokungazi. Mkhulu kakhulu kunokuba uqaphela! Isikhathi sokuthola.
Landela le ndatshana: funda lapha
Ukufakwa ohlwini kwezixhumanisi: i-alcabal.nl
Amathegi: Anon, cabal, coronavirus, Covid-19, Donald, IMBers, Janet, i-lockdown, U-Ox unentshebe, ubhubhane, Q, trump, ukuqhuma
Alie Muana wabhala:
24 March 2020 ku-12: 59
Kumahhala uthole, mahhala uzonikeza…
Kungani ungasidedeli isisombululo sakho ngokukhululeka?
Ngithola umqondo wokushintshwa ekuthengeni incwadi yakho ukuthola isisombululo sakho.
Angicabangi ukuthi lokho kuyahambisana nezambulo oziveza.
Noma nginephutha ngalokho?
24 March 2020 ku-13: 18
Uma uya esitolo sezincwadi ukuthola iBhayibheli, uyithola mahhala?
Uma uya endaweni yokubhaka izinkwa isinkwa uyithola mahhala?
Uma ubukela i-TV, awunawo yini okubhalisele okukhokhelwayo?
futhi uthi "Akunalutho olutholile, ngoba akukho lutho ongezolunikeza ..."
Angikaze ngakwenza lokhu mahhala iminyaka engaphezu kwengu-7, kodwa angikwazi ukucela umshicileli ukuthi aprinte incwadi yami mahhala.
Incwadi inikeza isifinyezo sayo yonke leyo minyaka engu-7 ngakho konke okusencwadini kukhululekile futhi ifundeka mahhala etholakala lapha esizeni. Lapho-ke kufanele useshe bese uqhafaza kusuka esihlokweni uye esihlokweni. Kodwa-ke, le ncwadi inika isifinyezo esihle kakhulu futhi yenziwa; ngesicelo sabafundi abaningi.
Ukwesekwa nokwazisa kwakho kuyaziswa. Vele akudingekile. Kuvunyelwe.
24 March 2020 ku-22: 20
Ngisanda kuthenga incwadi yakho! Ake ngigqugquzele iminyaka. Ukuphela kwento esezizwa imnandi futhi ithembekile ngolwazi nguwe!
Hhayi kuphela abantu abaningi engike ngizwe ngabo.
Umbuzo wami ufundeka kanjena.
Bangasivala kuze kube nini? Sisho nezingane njll ezingakwazi ukuthatha isikhathi eside impela? Ngaphandle kwalokho nokwazi konke onakho! Ungesabi yini ukuthi bazokucosha noma bakwenze unyamalale noma kukuphi lapho kungakhona (kwesinye isikhathi uzibuze ukuthi kuphi) kusho ukuthi konke kungafundwa ku-inthanethi. Futhi kungafinyelela lapho kungabonakala khona ukuthi ubani othenge incwadi? Ukuthi vele bazosebenza kulokho ukuthi bakulande. Ngizoyifunda kahle incwadi yakho. Thanda futhi unakekele.
Umama okhathazekile okwamanje, kodwa azi ukuthi sinamandla amakhulu kakhulu futhi sicabanga ngokwengeziwe! Kepha umbuzo usenjani ..
24 March 2020 ku-14: 06
Impendulo yakho kuMartin ayicocekile. Ngiyekeni
24 March 2020 ku-14: 08
Ngokuvamile azikaze zishicilelwe amagama (manje uyazi ukuthi kusebenza kanjani ... ama-troll, amaphrofayili enkohliso, i-bots ... kodwa ikakhulukazi ama-IMBers) abaphendula lapho kubalulekile ukuthi imithombo yezokuxhumana ihlale ngokuphelele kusisekelo semibono yombuso.
24 March 2020 ku-13: 16
Le yi-ajenda yabasolwa ejwayelekile, abangahambisani nayo bangavumi!
24 March 2020 ku-19: 01
UGreta Thunberg uyakujabulela ukudlala ngaphandle nezinye izingane
ngokusobala ayigcinwanga ngokuphelele kude kude ukusuka kuhafu wemitha
Noma walala eNetherlands ebusuku entwasahlobo wabamba amakhaza ngama-degrees Celsius ngo-6 entwasahlobo?
24 March 2020 ku-19: 45
24 March 2020 ku-20: 17
Yebo kuyaqala ukuzwela (uma bekungeyona into abayifunayo).
24 March 2020 ku-20: 16
Ngifunde ukuthi ukujula okugxila emgodini onogwaja futhi uma uphumelela ukuthola imithombo efanelekile (ngicabanga ukuthi leli sayithi liwumthombo omuhle kakhulu eNetherlands) kuya kuba lula ngokwengeziwe kumakhoba (ezinye izindawo ezilawulwayo) ).
Ukuqonda kwakho kuba ngcono ngaso sonke isikhathi. (Ngicabanga futhi eminyakeni embalwa edlule ukuthi uBaudet no-eg nigel farage babehluke ngempela). Kunoma ikuphi, manje ngikholelwa ku-100% ephelele
Ama-99% noma ngaphezulu amasayithi ahlukile alawulwa ukuphikiswa
I-100% yabo bonke osopolitiki emhlabeni wonke ilawulwa ngokuphelele (ukusebenzela) abakhethiweyo. (akukho neyodwa engahloliwe).
25 March 2020 ku-05: 25
Kite !!! Ekugcineni imali eyisisekelo (nohee, funda isihloko sika Mnu Vrijland ngoNovemba 2019)
Abantu abaningi bajabule kakhulu ukuthi umbuso uzoza kubo ngemali!
Imali esincike kuyo ngumbuso ofanayo.
Imali esiyidingayo, yabo (abasolwa ejwayelekile) abanayo futhi sincane kakhulu, manje sekungama-zeros kanye nalezo esingakwazi ukufinyelela kuzo.
Kodwa senziwa sijabule ngemali futhi, uMartin usevele wanikela ngayo incwadi, ngaphambili, inja kwesinye isikhathi ithola isigaxa futhi konke okunye kulungile, ukulanda, Hlala, Lie, Pak, Kuhle
Iphakethe lihle, lilihle
25 March 2020 ku-10: 23
Ngakho-ke eMelika bafuna ukwenza uhlobo lokwethula imali eyisisekelo (ama-3000 usd ngomndeni ngamunye engikholwayo). Lokhu kuzoba nomphumela wokuthi lokho okubizwa ngokuthi yimali eyisisekelo yesikhashana (okwesikhashana kuyindaba yezikhathi zonke) e-US.
Kubukeka sengathi le mali eyisisekelo izokhokhwa ngohlobo lwemali kuphela (uhlobo lwe-FED bitcoin) okungenani ngikuzwile lokho. Ngakho-ke bonke abantu mabajwayele imali entsha ye-One World Electronic.
Lokhu kuzokhishwa emhlabeni wonke jikelele.
Kubukeka sengathi abantu base-US nase-Asia (kepha ngikuzwile lokhu kushiwo) manje sebekhipha i-5G super ngokushesha (ngaphandle kwe-pushback ngoba inani labantu manje selisenza ezinye izinto). Ngicabanga ukuthi lokhu kuzokwenzeka nakwamanye amazwe omhlaba.
E-Afrika, lapho amazwe amaningi eseku-3G, angazi ukuthi angakwenza kanjani lokhu.
Kukhona nokukhuluma ngobuchwepheshe be-6G, angazi ukuthi luhlobo luni lwethusu oluzoletha. Ubuchwepheshe obusha buhamba ngokushesha kakhulu kangangokuba izinto ziyahlangana ngenkathi eyedlule ingazange yethulwe.
25 March 2020 ku-10: 52
U-Elon Musk unamarokhethi amahle athi ukwethula inqwaba yama-satellite e-5G emoyeni ukuze afakwe emhlabeni jikelele.
Ngiyazibuza ukuthi kwenzeka kanjani lokhu, ngoba imvamisa ye-5G izodinga ibanga elincane, kepha yilokhu okuthola kwabezindaba.
26 March 2020 ku-06: 54
Kusukela ngo-Mashi 19, 2020, i-COVID-19 ayisabhekwa njengengumphumela ophezulu wezifo ezithathelanayo (HCID) e-UK.
.. Ngaphandle kokuthi eMadurodam 🙂
26 March 2020 ku-07: 10
Lokho kungenxa yokuthi uTrump, uBolsonaro noJohnson bonke bamele uhlobo olufanayo: uphawu olungakwesokudla
Futhi njengoba sengibhale kaningi ezihlokweni eziningi, abantu abanjengoRobert Jensen, u-Alex Jones nezinsimbi zomlomo ezinamaphiko asesandleni kufanele zibe yindawo enhle yokuphepha. Kumele zithole abalandeli abaningi abagxeka imidiya esezingeni eliphezulu nepolitiki esezingeni eliphakeme. Kufanele basize ekwakheni lolo hlobo futhi baxhumanise ngokucacile ifilosofi ethile kulolo hlobo. Kufanele futhi baxhumeke ngokucacile lolo hlobo ekamu likaTrump (uTrump, Bolsonaro, Johnson).
Lapho-ke lowomkhiqizo (obhalwe ngokusobala) uzoshaywa ngokuhlanganiswa. Umgwaqo osukhethiwe manje umgwaqo we- "Benza sengathi akukubi kangako ngobhubhane lwe-coronavirus". Umkhiqizo ongakwesokudla uxhunyaniswa 'nabakwa-coronavirus abaphikisi bezinhlekelele'.
Lapho-ke lolu daba selucishiwe ngokuphelele. Ngemuva kwalokho uTrump noBolsonaro noJohnson (ukuphela kukaBrexit) kufanele bashiye inkambu kanti no-cabal waso osele edonsa isikhathi sezepolitiki uthatha izintambo futhi nabagxeki baye ejele; akekho umuntu okufanele angabaze abezindaba abajwayelekile futhi.
Umphumela: a wobukhomanisi bobuzwe "wobumbuso bokusinda" kubandakanya namaphoyisa acabangayo.
ULydia Roosje wabhala:
29 March 2020 ku-13: 34
Ngiyabonga Martin ngokuqonda kwakho. Ngithenge incwadi yakho njenge-PDF ngoba bengingazi ukuthi ukuvalwa okuphelele kuzofika, kepha akukakabi manje, thina bantu baseDashi “abahlakaniphile” bangaphatha “ukukhiya okukhaliphile”. Kumele ngisho ukuthi ngake ngashiya phansi ngoba ngicabanga ukuthi akunangqondo ukuthi ubize zonke izinhlobo zabantu njengobuphikisi obulawulwayo, kepha manje sengiyabona ukuthi ubuqinisile kunalokho ebengikucabanga ngaleso sikhathi. Kusukela uCharlie H ngifunde kuwo wonke ama-rabi - igama engikhethe ukungalisebenzisi ngoba manje ngiyazi ukuthi yisingathekiso solodophile sodomy - futhi empeleni iziphetho eziningi ezifile zaqala ukubekwa ngezinhloso. Ngikhungathekile ukuthi iningi labantu emhlabeni wonke njengezimvu ezinamaxhaphozi liqondiswa kanjani ukwesaba ukuvala imigwaqo nokungena emphakathini. Njengoba ulimi luhlobo lokupela, la magama amabili anokulinganisa okuningi kunokuba ungacabanga ekuqaleni kokubona. Isiqubulo esinebanga elingokomzimba kepha ngokomphakathi entweni ethile sasingaba nomthelela ohluke ngokuphelele. Futhi ukukhiya, empeleni, kubhekisele ekuvaleni komphefumlo wethu noma esitokisini sesitayela selineni njengoba usibiza kanjalo.
UBill Wesick we-occultcience101, akasekho ku-YT kepha uhlu lwadlalwayo, futhi manje ku-ocs101ark.com unekhono ekuqondeni ulimi lokubhalwa kolimi lweSaturnal Luciferian olwatheleleke ngegciwane langempela. Ngeke uyibone uze uyibone. Ngeshwa, i-99% yethu yezimvu ayikuboni.
Ngiba nokuqaqanjelwa yisisu lapho ngicabanga ngalokho okulindelwe isintu, kodwa ngenza konke okusemandleni ami ukuqhubeka nokuxhumana nekhodi yami yomthombo engangiyiyo. Anginakho okunye engingakwenza ...
« Uyacelwa uqaphele: Idokhumenti yeCovid-19 Janet Ossebaard (Ninefornews) isicupho sezindaba ezingamanga
I-Trump, Q-Anon kanye 'nokuhlanza inganekwane' (uRobert Jensen, uJanet Ossebaard) »
Ukuvakashelwa okuphelele: 1.249.434
Izinyathelo zokuvala iCoronavirus covid-19 zandiswa ngo-Ephreli 6 futhi ziba nzima ngokwengeziwe